Raysal Wasaaraha Itoobiya oo sheegay in saamiqaybsiga shidaalka dhulka Soomaalidu uu la mid noqondoono Dahabka dhulka Oromada la soo saaro. – Madal Furan
Hoy > Warka > Raysal Wasaaraha Itoobiya oo sheegay in saamiqaybsiga shidaalka dhulka Soomaalidu uu la mid noqondoono Dahabka dhulka Oromada la soo saaro.
Raysal Wasaaraha Itoobiya oo sheegay in saamiqaybsiga shidaalka dhulka Soomaalidu uu la mid noqondoono Dahabka dhulka Oromada la soo saaro.
Madal Furan – Raysal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo shalay kulan la qaatay dadka Soomaalida ee ku hoos nool ismaamulka dhulka Soomaalida ayuu waxaa uu sharaxay hadal muran badan dhaliyey ee la xiriira saamiga Soomaalidu ku yeelanayaan shidaalka laga helay dhulkooda.
Khudbadii uu Abiy Ahmed u jeediyey Soomaalida oo qaadatay 15 daqiiqo ayaa 10 daqiiqo oo ka mid ah wuxuu kaga hadlay arrinta shidaalka dhulka Soomaalida laga helay ee dhaliyey muranka badan, wuxuuna tilmaamay in si khalldan loo fahmay hadlakiisii ahaa 5% in Soomaalidu leedahay.
Abiy Ahmed ayaa sharaxay in hadalkiisu uu micnihiisu ahaa in 5% ay leeyihiin dadka deegaanka ceelasha laga hela iyo xoolo dhaqatada ee aysan aheyn Soomaalida oo dhan.
Wuxuu kaloo xusay in dahabka laga helo dhulka Oromada ay wada manaafacaadsadaan dhamaan shucuubta dalka Itoobiya sidaas oo kalena looga baahan yahay kheyraadka laga helo dhulka Soomaalida in ay wada manaafacsadaan dadka Itoobiya ku nool.
Kulankan ayaa waxaa goobjooge ka ahaa Madaxweynaha cusub ee dalka Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar iyo Guddoomiyaha Xisbiga talada haya ee Ismaamulka dhulka Soomaalida ahna Wasiirka Warfaafinta Dowladda Itoobiya Axmed Shido.
DAAWO:- Somaliland oo sheegtay in Xuduudoodu ka shisheyso tuulada Tuka Raq 40 Km ayna ciidamadoodu soo xiri doonaan
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea oo booqassho ku tegay magaaladda Muqdisho
Markabkii siday xoolaha laga soo celiyey dalka Saciidga oo dekedda Boosaaso ku soo xirtay